Wilfried Zaha Oo Kooxdiisa Crystal Palace Hal Arin Ka Dalbaday, Go'aanka Uu Ku Gaadhay In Uu Arsenal Ku Biiro Iyo Dhibaatada Hortaagan. - Gool24.Net
Wilfried Zaha Oo Kooxdiisa Crystal Palace Hal Arin Ka Dalbaday, Go’aanka Uu Ku Gaadhay In Uu Arsenal Ku Biiro Iyo Dhibaatada Hortaagan.
Wilfried Zaha ayaa go’aan ku gaadhay in uu xagaagan ka baxo kooxdiisa Crystal Palace wuxuuna si waali ah u doonayaa in uu ku biiro Arsenal laakiin waxaa jirta hal dhibaato taas oo u diidi karta in uu Gunners u wareego.
Kooxda Crystal Palace ayaa Wilfried Zaha ku qiimaynaysa 80 milyan gini laakiin lacagta ay Arsenal suuqa kala iibsiga u ahysato ayaa guud ahaan ah 45 milyan gini oo kaliya taas oo ah dhibaatada ugu wayn ee kala dhex joogta Wilfried Zaha iyo Arsenal.
Wilfried Zaha ayaa kooxdiisa Crystal Palace ka dalbaday in ay hoos u dhigaan qiimaha ay ku iibinayaan si ay ugu suurtogasho riyada uu ku doonayo in uu Arsenal ugu biiro.
Laakiin kooxda Crystal Palace oo doonaysa in ay Wilfried Zaha kooxdeeda ku sii hayso ama ay lacag badan ka hesho ayaa sidoo kale maanka ku haysa in iib kasta oo uu Zaha kooxdeeda kaga baxo ay Man United ka heli doonto boqoliiba 25%.
Markii uu Wilfried Zaha ka baxayay Manchester United ee uu Crystal Palace ku biiray waxaa heshiiskiisa ku jirtay in United ay helayso boqolkiiba 25% ka mid ah lacag kasta oo mustaqbalka lagu iibiyo.
In heshiiska Wilfried Zaha ee Crystal Palace ay afar sanadood ka hadhsan yihiin iyo in difaaca midig ee Wan-Bissaka uu Man United ugu biirayo 50 milyan gini ayaan suurtogal ka dhigayn in Crystal Palace ay hoos u soo dhigto qiimaha Zaha.
Arsenal ayaa doonaysa in ay kooxdeeda ka dirto Shkodran Mustafi iyo Mesut Ozil si uu Unai Emery u heli karo lacag uu suuqa ku kordhisto laakiin ilaa hadda waxay Gunners ku dhibtoonaysaa in ay dalabyo u hesho xidigahan.
Inkasta oo uu Zaha bishii April cadeeyay in uu diyaar u yahay in uu tartan cusub raadsado oo uu Crystal Palace ka bixi doono haddana qiimaha sare ee ay Crystal Palace dul dhigtay ayaa dhibaato wayn ku ah.
Wilfried Zaha ayaa hadda maamulka kooxdiisa ka dalbaday in ay hoos u dhigaan qiimaha lacageed ee ay isaga ku doonayaan si ay ugu suurtogasho in uu Arsenal ku biiro.
Haddii uu Wilfried Zaha maamulka kooxdiisa ku qanciyo in ay qiimihiisa hoos u dhigaan, waxaa markaas ka go’an in uu Arsenal ku biiro oo uu C.Palace ka baxo.
Si kastaba ha ahaatee, lacagta ay Arsenal suuqa kala iibsiga u haysato iyo qiimaha ay Crystal Palace ku doonayso Wilfried Zaha oo 80 milyan gini ah ayaa ilaa hadda ah dhibaatada ugu wayn ee ay Gunners xidigan ula saxiixan karin.